फिल्मि खबर Archives - Page 43 of 45 - inaruwaonline.com
पैसा लिएर यौन सम्पर्क गर्ने गरेको चर्चित नायिकाको खुलासा
एजेन्सी । भारतकी चर्चित नायिका शर्लिन चोपडाले आफुले पैसा कमाउनकालागि सेक्स गर्ने गरेको खुलासा गरेकी छिन् । उनले आफुले धेरै जनासँग पैसा लिएर सेक्स गरेको बताएकी हुन् । बेला बेलामा यस्ता अभिव्यक्ति स दृश्य खिचाएर विवादमा आउने गरेकी शर्लिनले प्लेवोइ म्यागेजिनकालागि दिएको अन्तरवार्तामा यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । उनले पैसा लिएर सेक्स गर्दा पनि आफुलाई निकै आनन्द आएको बताएकी छिन् । उनले क्षणीक आन...
अमेरिकामा सवारी दुर्घटना, दिनेश डिसी घाइते
२३ कार्तिक काठमाडों । चलचित्र निर्देशक दिनेश डिसी सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका छन् । अमेरिका भ्रमणमा रहेका उनि दुर्घटनामा परेका हुन् । उनकी पत्नी रानुसमेत घाईते भएकी छिन् । उनिहरुको ब्राकेनरिज अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । दुर्घटनामा डिसीको छातीमा चोट लागेको छ ।डिसी शनिबार एटलान्टा उड्न अस्टिन एयरपोर्ट जाने क्रममा दुर्घटनामा परेका हुन् । दुर्घटनाका कारण दिनेशको छातीमा चोट लागेको छ भने उनी पत...
तमाशामा दीपिका र रणवीरको लामो किस हटाइयो
चलचित्र ‘तमाशा’मा समावेश एक अन्तरंग दृश्यलाई भारतीय सेन्सर बोर्डले काटिदिएको छ । चलचित्रका मुख्य कलाकार रणवीर कपुर र दीपिका पादुकोणविचको यो लामो दृश्यलाई सेन्सरले काटेर यूनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएको छ । इम्तियाज अलीको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा दीपिका र रणवीरको केमेष्ट्री चम्कने आशा गरिएको छ । सेन्सर बोर्डलाई यो दृश्य खुबै उत्तेजक लागेको थियो । यसैले पनि यो दृश्य चलचित्रमा राख्न उचित नराखेर...
हलिउड फिल्म पाटनमा सुटिङ (भिडियो सहित)
हलिउड फिल्म सुटिङका लागि काठमाडौं आएको युनिटले पाटन क्षेत्रमा सुटिङ गरेको छ । ५८ जनाको हलिउड फिल्म सुटीङ युनिट काठमाडौं आएको थियो । युरोपेली जहाज कम्पनी एयरबसको ठूलो जहाज एयरबस ए–३४० सिरिजको विमान चार्टर गरेर युनिट काठमाडौं आएको थियो । बेनेडिक्ट कम्बरब्याचले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरिरहेको फिल्मको नाम मार्वल्स डाक्टर स्ट्रेन्ज’ छ । चलचित्र सन् २०१६ को नोभम्बरमा रिलिज गरिने छ । युनिटले राजधानीका विभि...
बिजेपी महासचिवले भने-शाहरुख देशद्रोही हुन्
असहिष्णुतालाई लिएर भइरहेको बहसमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)का महासचिव कैलाश विजयर्गीयले फिल्म स्टार शाहरुख खानलाई निशाना बनाएका छन् । उनले शाहरुखलाई देशद्रोही बताएका छन् । कैलाश विजयर्गीयले ट्वीटरमा शाहरुख भारतमा बसेपनि मत पाकिस्तानमा रहने बताए । उनले लेखेका छन्-‘उनको फिल्मले यहाँ करोडौं कमाउँछ । तर, उनी भारतप्रति असहिष्णु देखिएका छन् । यो देशद्रोह नभए के हो त ?’ मुम्बई बम आक्रमणको उल्लेख ग...
सानी सानी । चिटीक्क परेको जिउडाल । अझ भनौं, न सानी न ठुली । हिरोईनका लागी उनी अव लगभग तयार भैसकेकी छिन् । अहिलेसम्म २ वटा म्युजिक भिडीयोमा मोडलिङ गरिसकेकी यि मोडलको आकर्षक जिउडाल र अभिनयवाट प्रभावित नहुने को होला ? काजोल भन्छिन्, –‘मिहेनत गर्छु, भविष्यमा राम्रो नायीका वनेर देखाउनेछु ।’ काजोलको अभिनय, उनको लवाईखवाई, व्यवहारले अलिकति उमेर माथीनै पुगेको जस्तो देखिएपनि यथार्थता त्यस्तो छैन । ...
बाहुबली ३ बन्ने
चलचित्र बाहुबलीको तेस्रो संस्करण पनि बन्ने भएको छ । बाहुबलीका निर्देशक एसएस राजामौलीले बाहुबली ३ पनि बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । तर बाहुबलीको यो संस्करण अघिल्ला सिक्वेल जस्तो नभएर विलकुलै फरक हुने राजामौलीले बताएका छन् । राजामौलीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत बाहुबली ३ बनाउने तयारी सुरु भएको बारेमा जानकारी दिएका हुन् । उनले भनेका छन् ‘बाहुबली ३ बनाउने योजना बनि सकेको छ । तर बाहु...
५० बर्षमा साहरुख खान, गरिब यूवक कसरी बने विश्वकै धनी कलाकार ?
बलिउड नायक साहरुख खानले उमेरको अर्धसतक पुरा गरेका छन् । मुम्बई बान्द्रास्थित आफ्नै बंगला मन्नतमा उनले आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । साहरुखकी पत्नी गौरी खान, छोरा आर्यन र छोरी सुहानाले बर्थडे केक काटेका थिए । त्यसपछि घर बाहिर उभिएका प्रशंसकलाई उनले अभिवादन गरेका थिए । उनको घर बाहिर प्रसंसकहरुले रातभरसम्म आतिसबाजी गरेका थिए । आज दिनभर साहरुखको घर अगाडि प्रशंसकको ठूलो भिड लाग्नेछ । करिअरको...